ငွေလဲနှုန်း ပြုပြင်ရေးအပေါ် ကိုမိုးသီးဇွန် ရဲ့ အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ငွေလဲနှုန်း ပြုပြင်ရေးအပေါ် ကိုမိုးသီးဇွန် ရဲ့ အမြင်
Posted by kai on Sep 9, 2011 in Business & Economics, Think Tank | 12 comments
နေ့သစ် – စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ငွေလဲနှုန်းကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်။ ဦးမြင့်ရဲ စာတမ်း Myanmar Kyat Exchange Rate Issue by U Myint မှာ ငွေလဲနှုန်းပြင်ဖို့ကို တောက်လျောက်ဆွေးနွေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အိုင်အမ်အက်ဖ်ကလဲ ငွေလဲနှုန်းပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ၆ ကျပ်ခွဲ လုပ်ထားတာ လဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
မိုးသီးဇွန် – ငွေလဲနှုန်းကတော့ ပြင်သင့်တာပေါ့။ သိက္ခာရှိတဲ့ငွေလဲနှုန်း ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ မဆလခေတ်ကတည်းက သတ် မှတ်ထားတဲ့ တဒေါ်လာ ၆ ကျပ်ခွဲဆိုတဲ့ ငွေလဲနှုန်းက အေးဓပြတိုက်ထားတဲ့ ငွေလဲနှုန်းလို ဖြစ်နေတယ်။ ငွေလဲနှုန်းကိုလဲ အမျိုးသားရေးလိုလို ဘာလိုလို လုပ်ထားတာပေါ့ဗျာ။ မင်းတို့ တဒေါ်လာကို ငါတို့ဗမာကျပ် ၆ ကျပ်ခွဲပဲပေးမယ်။ လဲချင်လဲ မလဲချင်နေ ဆိုသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ မြန်မာ့ငွေလဲနှုန်း တကယ်ပြင်မှာလားဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး။ ကျနော့် ဘာလော့ခ်မှာ ကိုဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း ပြောသလို့ ဒို့ ဗမာကွဆိုတဲ့ တလွဲမာန ပေါ့။ စီးပွားရေးမှာကြတော့ ပြဿနာ တက်တော့တာပေါ့ဗျာ။ မဆလ အစိုးရခေတ်ကရော၊ လက်ရှိ စစ်အစိုးရတွေကနေ ဒီလဲနှုန်းကိုပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်ဈေးကွက် မှာ တမျိုးဖြစ်လာတယ်။ ခင်ဗျား ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက တဒေါ်လာဟာ ကျပ် ၁ ထောင်နဲ့ ညီနေတယ်။ ခင်ဗျား ၆ ကျပ်ခွဲ နဲ့ လဲမလား။ ဒီတော့မလဲဘူးပေါ့။ မလဲတော့ စီးပွားရေးမတက်ဘူးပေါ့။
ဦးမြင့်က သူစာတမ်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆိုပြုချက် Proposal က သူစာတမ်းအတိုင်း ငွေလဲနှုန်းပြုပြင် ဖို့ ငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်း အစိုးရက ပိုပြီးပတ်သက်ဖို့ အာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ ကျနော် မြင်တယ်။
မိုးသီးဇွန် – အမှန်တရားကို ထိပ်တိုက်မရင်ဆိုင်တဲ့သဘော။ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အခြေခံကနေ ပြောင်းရမယ်။ တချို့တချို့ သော လူတွေက လူမှုပြုပြင်မှုတွေက၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက တစတစနဲ့ ပြောင်းလဲလို့ရမယ်လို့ ပြောတာတွေ ကို သူတို့ ယုံမှားသံယ (Delusion) ဖြစ်နေကြတယ်။ အခြေနေမှန်ကို မရင်ဆိုင်ဘဲ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးပန်းမှုသာ ဖြစ်တယ်။ ဘုရားဟောတဲ့ ဝေဒနာ (Pain) ကို တည့်တည့်ရှုဆိုတာ ဒါကို ပြောတာပေါ့။
Note: Copied from NaytThit > http://www.naytthit.net/?p=19002
ဒါက သူကြီးလေ ။မှတ်ချက် သူ့ကြီး မပါဘူးပေါ့နော့။ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။ကိုမျိုးသန်းထွဋ်ရော နေကောင်းတယ်မလား။ကိုမျိုးသန်းထွဋ်ဆိုတာ ကိုမိုးသီးရဲ့ နာမည်ရင်းပါ။
ချဉ်ပေါင်ဟင်းက.. ဗမာ့အော်ရီဂျင်နယ်မဟုတ်ဖူး 11:07 PM
ငွေလဲနှုန်း ပြုပြင်ရေးအပေါ် ကိုမိုးသီးဇွန် ရဲ့ အမြင် 05:10 AM
ပြည်တွင်းမှာတောင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ အထိုက်အလျှောက်ပေးနေပြီလေ။ အင်ကြင်းပင်ပေါ်က ခါချဉ်တွေ သူကြီးကို မကိုက်ပါဘူး။
စည်းကမ်းကိုသေချာစွာဖတ်ကြည့်ပါ။ မန်ဘာ တဦးသည်တရက်လျှင် ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရလို့ ပါပါတယ်။ Admin တဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရလို့ရေးမထားပါ။
Do what I said, but don’t what I did.
Is Ko Moe The Zon is economic ? May I know ? Thanks.
“ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် ”
အဲဒါက အရင်စရမှာ ။
မဟုတ်ရင် သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်းဖြစ်နေဦးမှာ ……
…မကောင်းတဲ့ အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေ ရနေတယ်။ မကောင်းတာကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်း တွေ ထပ်တက်လာမယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်လာရင် ငွေကြေးဖေါင်းပွမှု ဖြစ်လာမယ်။…
ငွေတွေကကျစ်လွန်းလို့တောင်ခက်နေသေးတယ်။ ဒါကလည်း ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးပျံခိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
…မြန်မာပြည်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုက သဘ၀ဓါတ်ငွေ့က ရတဲ့ငွေ၊ မြစ်တွေကိုရောင်းစားတဲ့ငွေ၊ သစ်တောကိုရောင်းစားတဲ့ငွေ ဒါပဲ ရှိတယ်။ ဒီ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေက အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်။ တသက်လုံးစားမကုန်ဘူးလို့ ယူဆလို့ မရပါ။ …
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်ကတည်းက မြန်မာလူမျိုးတွေဇာတိမာန်တက်ကြွအောင် ရိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ဓါက်စစ်ဆင်ရေး စကားလုံးတွေလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ရောင်းစားလို့ချမ်းသာနိုင်မှပဲ သယံဇာတတွေပေါတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။
ငွေဈေးထိမ်းချုပ်မှုဆိုတာကတော့ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်။ ငွေကြေးဈေးကွက်သဘောတရားအမြင်တွေကို ပြည်သူတွေဆီဖြန့်ဖြူးပေး ခြင်းဖြင့် ပြည်သူကို ပညာပေးခြင်း သတင်းပေးခြင်းတွေ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုတွေကိုတော့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကို အာဏာနဲ့ ကိုယ်လိုသလို ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်နေတာတွေကို အတင်းတားလို့ခက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းလက်ထက် ကတည်းက ငွေဈေးတွေ တက်ရင် အကြီးအကျယ်ဖမ်းခဲ့သော်လည်း ငွေဈေးတွေဟာ ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် စီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသည်ပင်တချိန်က ငွေဈေးဖောင်းပွမှုဒဏ်ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ အခုကတော့ငွေကျစ်မှုဒဏ်ကိုခံနေ့တာပါ။
…..ဦးနေ၀င်း လက်ထက် ၃၃ ဦး အကြံပေး ကော်မတီတောင် ဖွဲ့လိုက်သေးတယ်။ အကြံပေးချက်တွေအတိုင်း ဟိုးတုန်းကလည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ခုလည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။….
မဖြစ်လာဘူးဆိုကတည်းက မလုပ်လိုပါ။ မလုပ်ဘူးဆိုတာကလည်း မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုမသိခြင်း အဖြစ်မှန်နဲ့လိုအပ်ချက်တွေ အားနည်းချက်တွေကို မှန်ကန်စွာရှဖွေနိုင်မှုမရှိခြင်း ၊ ကိုယ်ကမှန်သောလမ်းကိုသိ၍ လုပ်ချင်သော်လည်း လူကြီးကသဘောမတူလျှင် လုပ်၍မရခြင်း ၊ မှာယွင်းသောနည်းလမ်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့်သာ မအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြင်ပါသည်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရလျှင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်သူများ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ စိတ်ကောင်စေတနာ အပြည့်အဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင် ၁၀နှစ်အတွင်း အတိုင်းအတာတခုအထိ သိသာစွာ တိုးတက်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အုတ်နံရံစီသောသူသည် သူ၏ အလုပ်ပြီးမြောက်သည်နှင့် တဖြေးဖြေးမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြေကြီးတူးသောသူသည် သူ၏ အလုပ်ပြီးမြောက်သည်နှင့်အမျှ တဖြေးဖြေး နိမ့်ဆင်းသွားပါမည်။ ဦးနေ၀င်းလက်ထက်က လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မြေကြီးတူးသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သဖြင့် တဖြေးဖြေးနိမ့်ဆင်းသွားသည်ဟုထင်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် လိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလွဲမှုများကိုလုပ်မည်ဆိုသောအချက်ကို – တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကို တခါမျှမကမ်းလှမ်းဖူးသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို မထင်မှတ်ပဲရုတ်တရက် ကမ်းလှမ်းသဖြင့် အံ့သြ၀မ်းသာ ဖြစ်မိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး စတင်ကမ်းလှမ်းရုံဖြင့် မည်သည့်သဘောတူညီချက်မှ မရရှိသေးပဲ စစ်တပ်ရုပ်သိမ်းပေးရန် စောနေပါသေးသည်။ ပထမအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးသူ့စည်းကိုယ့်စည်း လေးစားစွာနေကြခြင်းဖြင့် နယ်စပ်တိုင်းရင်းသားများ၏ စစ်ပြေးဒုက္ခများလည်းကင်းဝေးစေနိုင်ပါသည်။ပထမအဆင့် တဦးနှင့်တဦး ယုံကြည်မှုများရစေရန် သံသယကင်းစေရန်စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်ထင်ပါသည်။ တဦးနှင့်တဦး အပေါ်ယံ အယုံသွင်းခြင်းမဟုတ်ပဲ စစ်မှန်သော စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုမည်ထင်ပါသည်။ သဘောထားပျော့ပြောင်းပြီး တဦးနှင့်တဦး အလျှော့ပေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရာတွင် နယ်စပ်တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ ပြည်သူများကလည်း မိမိတို့၏ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းများကို ပေးကြစေလိုပါသည်။
ကိုမိုးသီးပြောတဲို့င်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှု ဟာအဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပေါ်မှာအဓိကတည်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသဘောကျလိုက်တာဗျာ။
(၁) နိုင်ငံကနေ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်ရမယ်။
(၂) တည်ငြိမ်တဲ့ ငွေကြေးစနစ်ဖွဲ့စည်းမှုရှိရမယ်။
(၃) သဘောထားမှန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်။ နေ့တမျိုးညတမျိုးမဖြစ်ရဘူး။
(၄) လူတိုင်းရဲ့အထက်မှာ ဥပဒေအမြဲရှိရမယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို အဓိကတိုင်းတာတဲ့ပေတဲဖြစ်တဲ့ GDP ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဆိုင်တာကြာပါပကော။ ခုရှိနေတဲ့စီးပွားရေး ဆိုတာက ကုန်ကြမ်းပေးကုန်ချောယူ trading၊ CMP စနစ်တွေ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေ၊ ငွေကြေးပေါ်မှာပြန်ပြီး ငွေလဲမှု တရားမ၀င်စနစ်ဆိုးနဲ့၊ ၀န်ကြီးမင်းများပါးစပ်ကထွက်သမျှ အမိန့်နဲ့ ဥပဒေဖြစ်နေသမျှ သတင်းစာထဲ့၊ တီဗွီထဲ၊ ဂျာနယ်ထဲပါတယ်တွေ က အဟောသိကံ ကျယုံမက၊ လူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာကပါ အယုံအကြည်ကင်းမဲ့စေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက “အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန” ရဲ့ “ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့” မှာ (၃)လပါတ်၊ နှစ်ပါတ်လည်စသည်ဖြင့်၊ “ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့်ပါတ်သက်၍ ပြည်သူသို့အစီရင်ခံစာ” ဆိုတာစာပေဗိမ္မာန်ကနေထုတ်ဝေပါတယ်။ အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို တခြားသူမပြောနဲ့ အစိုးရဌာနအချင်းချင်းကတောင် အသုံးမပြုနိုင်လောက်အောင် အမှန်တရားနဲ့ ကင်းကွာနေပါတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းလက်ထက်က (၃၃)ဦးကော်မတီ မှာ မောင်မိုးညိုရဲ့ အဖေကပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ ပြောပြချက်အရ နိုင်ငံရေးတကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေကြောင့်၊ အဖြေဘာတခုမှမရတဲ့ အပြင် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူ ဂိုဏ်ကွဲတွေ အားလုံးက သေတဲ့အထိ တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ချင်၊ စကားမပြောချင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိနားလည်ရခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ contemporary ဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေချင်းမို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေဖေါ်ပြီး၊ ညင်းလိုင်ခုံလိုက် ရန်ဖြစ်လိုက်ကြတာတွေက …ဒီကနေ့ လူထု သန်း (၆၀) ကို ချောက်ထဲတွန်းပို့ခံရတဲ့ထိအောင်ပါဘဲ….
မက်ကရိုစီးပွားရေးပိုင်းကို အမြဲလေ့လာနေတဲ့ သုတေသီ၊ ပညာရှင်တွေပဲ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ပြောဆိုနိုင်တယ်။ အဲဒါတောင် အများစုက လုံးကောက်သီအိုရီထက် မပိုဘူး။ မပိုဆို အချက်အလက် အထောက်အထား မပြည့်စုံဘဲ ထဲထဲဝင်ဝင် ကောက်ချက်ချလို့ မဖြစ်ဘူးလေ၊ နောက်ကွယ်မှာ မသိ မမြင် မလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ တပုံကြီး။ ကိုမိုးသီးရဲ့ စကားပြောစတိုင်၊ စာရေးသားဟန် ပြတ်သားမှုရှိလို့ နှစ်ခြိုက်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဒီလိုပဲ၊ ဒေါက်ဒေါက် ဒေါက်ဒေါက်နဲ့ အထစ်အငေါ့မရှိ ပြောသွားဖြေသွားလေ့ရှိတယ်။ မိမိကိုယ် မိမိယုံကြည်မှု ရှိတဲ့သဘောလို မြင်နိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့် အင်တာဗျူး၊ စကားပြောရင် အင်း..အဲ.. ဟိုဒင်း စသဖြင့် နားပြီးအချိန်ယူ ပြောရလေ့ရှိတယ်။ အဲလိုပြောလို တော်တယ် ညံ့တယ် ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတခုကို ထုတ်နှုတ်ပြခြင်းပါ။ macro တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတောင် ဒီလောက် နက်ရှိုင်းရင် ဒေသဆိုင်ရာ regional၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ global စီးပွားရေး ကိစ္စတွေဆို ဘယ်လောက်တောင် အသိပညာ အတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်မလဲ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို သတိမမူမိရင် အေပေးတွေ အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ ဆီမီနာ၊ ကွန်းဖရင့်တွေလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ခြေရှုပ်နေတယ်နဲ့ မြင်သွားတတ်လို့ပါ။ (အပြိုင်အဆိုင်များ ကြားကနေ တကယ်တော်လို့ စင်ပေါ်ရောက်လာသူများကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ နီးစပ်လို့၊ ရွေးစရာ မရှိလို့၊ ဘဘကြီးရွှေဘောတော်ကျ ပြောတတ်လို့ နေရာရသူများနဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ပါ)
မှတ်ချက်။ ကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီးသည် အနန္တစတြာဝဠာ စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြောရရင် ကမ္ဘာဆိုတာ စတြာဝဠာတခုလုံးနဲ့ နှိုင်းစာရင် မဟာပထဝီမြေထုကြီးထဲက ဖုံမှုန့်တမှုန့်မျှသာ ဖြစ်တယ် မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ။။။ Think Big, Act Well, Die Late, Go Nirvana !!!
ပဲခူးရေကြီးပြီးရေပြန်ကျတော့ ပေါလောပေါလောမျောနေတဲ့ ချီးတုံးတွေ အီးတုံးတွေ လမ်းတွေပေါ်မှာ
ထိပ်ပြောင်ကို ထောက်ခံပြီး ဟိုလိုဖြစ်သင့်ပါတယ် ဒီလိုဖြစ်သင့်ပါတယ်ပြောတဲ့အလုပ်ဘဲ
ကျုပ်တို့သိတာ တရုပ်ပစ္စည်းဈေးပေါတယ် ချောင်တယ် ဒါဘဲသိတယ်
လောလောဆယ် ရေမြုပ်တဲ့ စပါးပင်တွေပြန်ဖာရမယ်
လမ်းပေါ်က ချီးပုံတွေ ရှင်းရမယ် ဒါဘဲ